किन सौना जान्छ सार्थक हो - शुरुवातका लागि सौना
सौना - विश्राम र कल्याण
पहिलो सौना भ्रमणको लागि सुझाव
सौना सत्रको आदर्श अनुक्रम के हो?
नियमित सौना सत्रहरू केवल तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यको लागि राम्रो छैन, तर साँच्चै आराम गर्न पनि। कुनै पनि सर्वेक्षणको लागि यो होइन कि फिनल्याण्डको5मिलियन सौनामा2लाख मानिसहरूको बारेमा थाहा पाईदैन। जर्मनीमा पनि, अधिक से अधिक मान्छे शरीर, छाला र दिमाग मा गुप्त स्वास्थ्य-प्रवर्धन प्रभावहरु द्वारा कसम गरेर रहे हो।
यो सौना किन जाने को लायक छ?
विशेष गरी चिसो समयको दौडान यो सौन्दर्य नियमित रूपमा सौना हुन सक्छ। सौना मार्फत, सम्पूर्ण जीव र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाइन्छ, जुन लगभग रोगजन्य संक्रमणलाई असर पार्न सक्दैन।
जो लोग पीडा दुखाइ या तनाव देखि पीडित मान्छे को लागि, यो सौना मा जान पनि सिफारिश छ। सबैभन्दा राम्रो नतिजाको लागि, पीडाको धैर्य प्रायः यसको पेटमा झुन्ड्याउनुपर्दछ, ताकि सौना कम्प्लेटको तापक्रम सिधै पछाडि तिर फर्काउँछ। यो केवल पछाडि मा मांसपेशीहरू आराम गर्दैन, तर आत्मा पनि। तथापि, यो यहाँ सबै समय झूट महत्त्वपूर्ण छैन, तर स्थिर परिसंचरण राख्न बीचमा बस्न पनि आवश्यक छ। रूमेटिक समस्याहरू नियमित सौना भ्रमणबाट पनि हटाउन सकिन्छ।
केही असामान्य रोगहरूका लागि, मुँहासे जस्तै, साप्ताहिक सौना सत्र तय गरिएको हुनुपर्छ। गर्मीमा हल्का पछाडीको छाला खुट्टाले सिम्मसँग छेक्छ। यसले गति प्रक्रिया प्रशोधन गर्दछ।
सौना न केवल शरीर मा यसको प्रभाव को लागि सिफारिस गरिएको छ, तर पनि मानसिक रिकवरी को लागी। धेरै मानिसहरू बढ्दै जाँदा घमण्ड र तनावबाट पीडित हुन्छन्, जसको दुवै सफलतापूर्वक सौनामा जान्छ। निद्रा विकारहरूको लागि सौनाको यात्रा पनि सिफारिस गरिएको छ, जसले पसीनालाई राम्रो तरिकाले थकावटलाई प्रोत्साहित गर्दछ, जसले सुत्न चाँडै निस्कन्छ र सुरू दिन बिहान सुरू गर्न सुरू गर्दछ।
सौना को गर्मी को सबै व्यक्ति मा एक धेरै सकारात्मक प्रभाव छ। रेजिमेन्ट गर्मीले शरीरमा छालाको माध्यमबाट गुजराउँछ र शरीरको आफ्नै तापमान3° सेल्सियसको माथि बढ्छ। यस प्रक्रियाबाट, सबै चयापचय गतिविधिहरू बढेको छ, परिसंचरण बढेको छ र शरीरका सुरक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा बलियो बनाइन्छ।
• यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक यात्रा सौना मा कि सौना र छिटो मेल खाँदैन। प्रत्येक सौनाको भ्रमणको लागि पर्याप्त समय योजना बनाइनुको लागि ठीक छ र पुनःप्राप्ति गर्न।
• सौनामा मात्र स्नान तौलिया र स्यान्डल लिन सकिन्छ। सबै गहनेहरू अग्रिममा हटाइनुपर्छ, किनभने तिनीहरू गर्म जलिरहेका छन् र चोट लाग्न सक्छन्। यो पनि चश्मे बाहिर बाहिर र सम्पर्क लेंस मा फिर्ता आउन पनि राम्रो छ, किनभने भिजुअल सहायता तुरुन्तै डुब्न सक्दछ।
• प्रायः, यो सौना मा भोकाउन वा लुसुको स्वाद भन्दा पहिले खाना खानेदेखि टाढा रहनुपर्छ, किनकि यो परिसंचरणको लागि इष्टतम छैन। त्यस्तै गरी, सौना सत्रको समयमा अल्कोहल पेयहरू निक्कै हुँदैन।
• जो तीतो सौना बाहिर आउनु हुँदैन सिधै स्विमिंग पूलमा जम्प हुँदैन, तर पहिले छिट्टै पानीमा सुत्न र त्यसपछि तैरने सुरु गर्नुहोस्।
• औसतमा, 1 र2लिटर शरीर द्रव लिटर गुमाएमा जब तपाइँ एक सौना लिनुहुन्छ, त्यसपछि शरीरलाई छिट्टै सकेसम्म फर्काउन सकिन्छ। यो अझै पनि खनिज पानीको लागि उपयुक्त छ।
सौना प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले कुनै पनि पसीना को शरीर लाई छुटाउन को लागी बसाईन्छ। त्यसपछि सुक्खा राम्रो, त्यसैले सौना मा पसीना अवशिष्ट नमी द्वारा प्रभावित छैन।
सुरुमा, स्नान तौलिया बीचमा वा उच्चतम बैंकमा सौना कोठामा राखिएको हुनुपर्छ, जसमा सौना पोटर या त तल बस्न वा झूट हुन सक्छ। एक सौना भ्रमण राम्रो तरिकाले सौना को दुई वा तीन सत्रहरुमा हुनुपर्छ। शरीरलाई 8 र 10 मिनेटको बीचमा तापमानको आवश्यकता पर्दछ, तर गर्मीलाई पहिले असहज महसुस गर्नुपर्छ, चाट अघि सुरु गर्नुपर्छ।
पहिलो सौना सत्र पछि, हामी ठुलो वा चिसो स्नानको अनुगमन गर्छौं पछि हाइड्रेशनको साथ हावा स्नान र एक 20 मिनेट बाँकी अवधि। चिसो वर्षाको समयमा परिसंचरणको रक्षा गर्न, यो टाँस्नु र दायाँ माथि दायाँ टखनेलमा पहिला पानी चलाउन सिफारिस गरिन्छ, र त्यसपछि बायाँ तिर माथि देखि तल जारी राख्नुहोस्। पछि 12 देखि 15 मिनेट सम्म सौना फेरि भ्रमण गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया यो झूटो भन्दा साटोमा बस्न भन्दा राम्रो छ। नतिजाको रूपमा, केवल परिसंचरण अधिक स्थिर छैन, तर खुट्टाहरू राम्रो पनि खुला छ। सौनाको पहिलो भ्रमणमा तपाईंले कम भन्दा कम बेंचहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, किनकि यो कम तातो छ।
विश्राम प्रविधि | कल्याण विश्राम
सौना - जसको लागि सौना छ, अनुपयुक्त यात्रा
सौना - नग्न वा लुगा लगाउने?
सामान्य फिटनेस, कल्याण र आहार